China etsobhileyo Screw extruder nokwenziwa kunye Factory | Jiarui
I-twin-screw extruder yohlobo lomatshini wokuxuba osebenza kakuhle. Iimpawu ze-extruder enjalo zezi zilandelayo: isantya sokucheba esiphantsi, izinto ezinzima ukubola, xuba ngokulinganayo, umgangatho ozinzileyo, amandla aphezulu, usetyenziso olubanzi kunye nobomi benkonzo ende, njl.njl.Ukuba usebenza ngesikrufu esifanelekileyo kunye nabancedisi, inokukhupha ngokuthe ngqo iiplastikhi ze-thermoplastic , ngakumbi i-PVC powder engqongqo kumbhobho, kwibhodi, kwiphepha, kwifilimu okanye kwiprofayili, njl. nayo inokusetyenziselwa ukuguqulwa kweplastiki kunye ne-powder granulation.
I-twin-screw extruder yohlobo lomatshini wokuxuba osebenza kakuhle. Iimpawu ze-extruder enjalo zezi zilandelayo: isantya sokucheba esiphantsi, izinto ezinzima ukubola, ukuxuba ngokulinganayo, umgangatho ozinzileyo, amandla aphezulu, usetyenziso olubanzi kunye nobomi benkonzo ende, njl.njl.Ukuba usebenza ngesikrufu esifanelekileyo kunye nabancedisi, inokukhupha ngqo iiplastikhi ze-thermoplastic , ngakumbi i-PVC powder engqongqo kumbhobho, kwibhodi, kwiphepha, kwifilimu okanye kwiprofayili, njl. nayo inokusetyenziselwa ukuguqulwa kweplastiki kunye ne-powder granulation.
I-extruder ilungiswe ngokukhuselwa kwephutha, i-alarm ephezulu kakhulu, i-screw core ye-oyile yokujikeleza kwe-oyile, inkqubo yokupholisa i-barrel, umbhobho wokukhupha umbane kunye nesixhobo sokutya.
Zininzi iintlobo zenkqubo yolawulo yombane yokukhetha (umzekelo: Inkqubo yolawulo oluzenzekelayo ye-PLC). Iqhutywa yimoto yeDC. Ngokusebenzisa inverter okanye umlawuli wesantya se-DC unokufezekisa uhlengahlengiso lwesantya esingazinzanga, ukuchaneka okuphezulu kunye nokugcina amandla. Isinxibelelanisi sobukrelekrele esibonisa ubushushu bedijithali sisetyenziselwa ukuphucula ukuchaneka kolawulo kunye nokutshintsha kweqondo lobushushu.
I-twin-screw extruder ye-twin ye-screw extruder ubukhulu becala yenziwe nge-barrel screw, inkqubo yokuhambisa izixhobo, ukondla okuninzi, ukukhupha umbane, ukufudumeza, ukupholisa kunye nezinto zokulawula umbane njl.I-twin screw extruder ilungele ukuvelisa iimveliso ze-PVC kumgubo oxubeneyo .
Sisixhobo esikhethekileyo sePVC powder okanye iWPC extrusion. Inezibonelelo zokudibanisa okuhle, ukuphuma okukhulu, ukusebenza okuzinzileyo, ubomi benkonzo ende. Ngezixhobo ezahlukeneyo zokubumba kunye nezantsi, inokuvelisa iipayipi zePVC, iisilingi zePVC, iiprofayili zefestile zePVC, iphepha lePVC, ukucoceka kweWPC, i-PVC granules njalo njalo.
Izixa ezahlukeneyo zezikrufu, izikrufu ezimbini zokujija zinezikhonkwane ezibini, isikulufu esineqokobhe lesikere sinesikere esinye kuphela, Zisetyenziselwa izinto ezahlukeneyo, iscrew extruder ephindwe kabini isetyenziselwa i-PVC elukhuni, isikere esinye esisetyenziselwa iPP / PE. I-screw extruder kabini inokuvelisa imibhobho ye-PVC, iiprofayili kunye ne-PVC granules. Kwaye extruder enye inokuvelisa imibhobho ye-PP / PE kunye negranu.
I-extruder isetyenziswa ngokubanzi kwezi ndawo zilandelayo:
Ifanelekile iPVC, UPVC powder
Inkqubo yombhobho, ipleyiti, iphepha, iprofayili kunye negranules
Screw ubukhulu (mm)
Isantya esijikelezayo sescrew (r / min)
Amandla emoto aphambili (KW)
Imveliso (Kg / h)
Egqithileyo Screw extruder enye
Okulandelayo: Umgca wemveliso kumbhobho PVC